Iteknoloji-Jiangsu Meixin Optoelectronics Iteknoloji Co., Ltd.
Ulapha : Ikhaya>Technology
Xa sisebenzisa imijikelezo enzima kwi-weld yensimbi engenasici, kuvame ukuba kubekho iphuli ye-weld. Xa sigqiba ukwenza i-welding, kukho ukukhanya okusalelayo okuseleyo. Ke, ungasebenzisa "ukulibazisa" (ukusebenza) ukwandisa ixesha lokutshintsha kwesikrini kwakhona.
Sebenzisa i-welder eguqulweyo kwi-TIG, setha i-5 ampere ezinzileyo yangoku, kwaye unokwenza ukuqonda kwe-ADF kubuthathaka kwaye kuzinze nge-arc ngokunyusa "ukuqonda", ngaloo ndlela ufezekisa injongo yokutshintsha ukukhanya.
Xa u-welding, ukuba unethemba lokuphucula ukusebenza kakuhle, unokwenza isikrini esiguqukayo siphinde sikhanyise ukukhanya ngokunciphisa ixesha lokulibaziseka. Ke, unokujonga indawo yentsimbi ngokukhawuleza kwaye ulungiselele i-welding elandelayo.